Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden dhimma mirga namoomaa handhuura imaammata isaanii alaa taasisanii jiran. Kan imaammaticha simatan hoogganoonni jaamiyaalee mirga namaa garuu imaammatichi hojiin hordofamuu qaba jedhan.
Maaynamaar, Raashiya fi naannoo addunyaa keessatti kan geggeesaman hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii hamaan fudhatamu, kan bulchiinsi Baayiden mirga namaa bu’uura imaammata alaa Ameerikaa ti jechuun waadaa seene qormaata keessa galche.
Ministriin dhimma alaa Antonii Biliinken, prezidaant Baayidn mirga namaa giddu gala imaammata alaa Ameerikaa gochuuf cicha qaba. kanaaf cichi kun anii fi guutummaa ministrii dhimma alaa keessa kan jirru ka haalaan irratti fuuleffann jedhan.